Nchegbu na egwu - Nnukwu ọdịiche | Bezzia
Susana godoy | 19/06/2022 18:00 | Psychology
Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ ha na-aga aka na aka, usoro nke ọdịiche dị n'etiti nchegbu na egwu. N'ihi na ha abụọ abụghị otu ma ọ bụ oge ịmalite ịghọta mgbe ha kwesịrị ikewapụ. Ma ha nwere ike ibute nnukwu mgbagwoju anya n'ihe gbasara mmetụta uche. Ị maara ka esi amata ha?
Ọ bụrụ na anyị na-eche banyere ya, ọ bụ mgbagwoju anya, ee. N'ihi na n'ọnọdụ abụọ ahụ na mmetụta nke nhụjuanya nwere ike ịdị na ma egwu na nchegbu. Ma anyị agaghị ewere ha dị ka mmeghachi omume yiri nke ahụ, n'ihi na e nwere ọtụtụ nkọwa na-ekewa ha. Yabụ, chọpụta n'okpuru na ihe niile anyị nwere maka gị.
1 Ihe mkpali na-akpalite nchekasị na egwu dị iche
2 Mmeghachi omume ndị ahụ
3 Okwu dị na nke ọ bụla n'ime ha
4 Oge nke ọdịdị ya
5 otú e si emeso ha
Ihe mkpali na-akpalite nchekasị na egwu dị iche
Ya bụ, mgbe anyị nwere nchegbu anyị ga-eme ya n'ihi ọnọdụ ndị na-enweghị ihe jikọrọ ya na egwu. Ya mere, ha na-eme na mpaghara dị iche iche. Iji mee ka o doo anya site na mmalite, a ghaghị ikwu ya egwu na-apụta n'ụbọchị anyị taa bụ́ mgbe e nwere ihe ize ndụ nke ndụ anyị pụrụ ịnọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị hụ agụ na-agba ọsọ n'ebe ị nọ, ụjọ ga-atụ gị ma ọ bụ ụjọ ma ọ bụghị nchegbu. Ebe ọ bụ na anyị na-eche ya dị ka ihe iyi egwu, dị ka ihe nwere ike ime ma emebeghị, ma kwuru iyi egwu adịghị enwe ụdị ọ bụla nke ihe ize ndụ ndụ. Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịdị ka otú ahụ, n'ihi na ọ bụ eziokwu na inwe nchekasị na-eweta anyị ọtụtụ mgbaàmà ndị yiri ihe ize ndụ nye anyị ma na-echebe anyị n'ezie.
Mmeghachi omume ndị ahụ
Ugbu a, anyị maara na mmalite nke abụọ ahụ abụghị otu, ya mere mmeghachi omume na mmetụta ha abụghịkwa.. N'ihi na mgbe anyị na-atụ egwu, ihe mbụ na-emeghachi omume nke anụ ahụ bụ ịgbapụ, tie mkpu, mgbe ụfọdụ na-enwe mmetụta uche, wdg. Ma na nchegbu, ọ baghị uru ịgbapụ ma ọ bụrụ na uche anyị kwenyere na e nwere nnukwu nsogbu. Ya mere, anyị aghaghị ịchọ nsogbu ahụ nke na-ebute echiche ọjọọ na nke na-aghọ engine nke ndụ anyị. Ya mere, mmeghachi omume dị nnọọ iche.
Okwu dị na nke ọ bụla n'ime ha
E nwere ọtụtụ ndị na-apụghị izere ọdịdị ihu ha mgbe ihe na-enye ha nsogbu ma ọ bụ mgbe ọ masịrị ha. Ya bụ na site na mmegharị ahụ ha ga-achọpụta ma ọ dị ha mma ma ọ bụ na ha adịghị. Yabụ, ọ bụrụ na mmadụ na-atụ egwu, anyị doro anya na ọ ga-egosi n'ihu ha. N'ihi na okwu ahụ bụ isi na dị ka ndị dị otú ahụ, a maara nke ọma. A na-ekwu na ọ bụ eluigwe na ala n'ihi na n'ụwa nile onye ọ bụla ga-egosipụta okwu ahụ n'enweghị ihe ọ bụla. Ma site n'oge enwere nchekasị, ọ dịghị okwu ọ bụla metụtara ya.
Oge nke ọdịdị ya
Mgbe anyị na-atụ egwu ọ bụ n'ihi na ọ bụ banyere mmeghachi omume ngwa ngwa na iyi egwu nke anyị nwere n'ihu anyị. Ma nchegbu anaghị apụta na mberede n'ihi na anyị na-eche ihe iyi egwu ihu. Ọzọkwa, a na-ekwu na nchekasị na-abịakarị mgbe nsogbu ma ọ bụ mmetụta na-akpakọrịta. Ọ bụ ezie na ọ ga-apụtakwa mgbe anyị na-echegbu onwe anyị banyere ọdịnihu na ihe ndị na-emebeghị. Yabụ, dị ka anyị nwere ike ịhụ, oge nke otu mmetụta nwere ike ịpụta na nke ọzọ adịlarị iche.
otú e si emeso ha
Ọgwụgwọ nchegbu na egwu dịkwa iche. N'ihi na n'ihe banyere egwu, enwere ike ịgwọ ya naanị mgbe anyị na-ekwu maka phobias nke na-egbochi ndụ anyị nkịtị. Mgbe anyị kwuru banyere nchegbu, dị ka a n'ozuzu na-achị, ị ga-enwe a psychiatric na a mmetụta uche ọgwụgwọ, ebe A ga-enye usoro usoro iji tinye n'ọrụ ma gbalịa ịchịkwa mmetụta na echiche ndị ahụ nke na-eme ka ndụ gị bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Psychology » Ihe dị iche n'etiti nchegbu na egwu
Chickpeas na-esi ísì ụtọ na poteto na peas